[OFFICIAL] SIM Isevisi ye-Vula - Vula ikhadi le-SIM efonini yakho yeselula ngezinyathelo 3
dr.fone yamathuluzi - SIM Isevisi ye-Vula
Vula ifoni yakho ku-3 ezilula!
Fast, ephephile futhi unomphela
1000+ amafoni asekelwa, 100+ kunethiwekhi abahlinzeki asekelwe
amazwe ezingaphezu kwezingu-60 asekelwe
Khetha ifoni yakho
I elula, okusheshayo, ephephile futhi ngokomthetho indlela ukuvula ifoni yakho.
awusoze ube ukuphinda inqubo. Ungabuyekeza isofthiwe yefoni njengoba evamile futhi ulisebenzise kunoma iyiphi inethiwekhi emhlabeni.
Iziqondiso Ukuvula sizosebenza iselula sivalwe amalungelo, kodwa khumbula ukuthi uvula ifoni akusisusi kusukela lokuvinjiwe. Ingabe ifoni yakho iye sivalwe? Hlola lapha
Esikhathini nesenzakalo ezingavamile asikwazi ukuvula ifoni yakho nganoma yisiphi isizathu ngaphansi umthwalo wethu, sizobe ukukubuyisela imali egcwele.
Uzokwazi ukusebenzisa ifoni yakho nganoma yimuphi umhlinzeki inethiwekhi emhlabeni.
Le ndlela kungokwaphakade akwephuli yesiqinisekiso wefoni yakho.
Ifoni yakho babengakaze ukushiya ngohlangothi lwakho. Qhubeka usebenzisa ifoni yakho ngesikhathi senqubo Ukuvula.
Khetha ifoni yakho bese ugcwalise ifomu yesicelo.
Thola ikhodi yakho ukuvula nge e-mail.
Thayipha ikhodi Ukuvula phakathi kwefoni yakho
Hlola isimo se-oda
Vula Ucingo lwakho
Chofoza logo brand sika ukukhetha efonini yakho, Gcwalisa ifomu lesicelo bese uthola yesinyathelo ngesinyathelo imiyalelo yakho Ukuvula ngu e-mail.?Once umlandele imiyalelo yethu elula efonini yakho izovulwa ngokushesha futhi isilungele ukusetshenziswa iyiphi inethiwekhi umhlinzeki.
Qedela amazwe nakunethiwekhi abahlinzeki Oluvumelana
FAQ - Ucingo wokuvula
+ Kanjani mina ukuvula ifoni yami Dr.Fone - Isevisi ye-Vula i-SIM?
Ukuze uvule ifoni yakho nge Dr.Fone - Isevisi ye-Vula i-SIM, ukhethe ukwakheka, imodeli, izwe nakunethiwekhi umhlinzeki ifoni yakho ikhiyiwe ukuba. Uma sesithole inkokhelo, isicelo sakho sizocutshungulwa futhi kungakapheli yibhange ukulethwa isikhathi uzothola ticondziso letilula yesinyathelo ngesinyathelo nge e-mail ngendlela ukuvula ifoni yakho.
Uma udinga usizo nganoma isiphi isikhathi phakathi kwenqubo Ukuvula uxhumane nathi nge chat, ngocingo noma ezinkundleni zokuxhumana.
+ Indlela Kubiza ukuvula ifoni yami?
Intengo ikhodi Ukuvula iyahlukahluka kuye ezicini eziningana. Intengo ngqo kuzovezwa uma ukhetha asenzayo, imodeli, izwe nakunethiwekhi umhlinzeki ifoni yakho ikhiyiwe ukuba. Kanye kokuthola izaphulelo for nokuvula ngamunye, siye kwakuhlanganisa izaphulelo afika ku-50% kwi-website yethu.
+ Ingabe ukuvula unomphela futhi esebenzayo phesheya?
Yebo. Uma usuvule ifoni yakho nama-SIM Isevisi ye-Vula awusoze ube ukuphinda inqubo. Ungabuyekeza isofthiwe yefoni njengoba evamile futhi ulisebenzise kunoma iyiphi inethiwekhi emhlabeni.
+ Kuyoze kube nini Kumthatha ukuvula ifoni yami?
I yibhange ukulethwa isikhathi kuncike kuzwe nakunethiwekhi umhlinzeki ifoni ikhiyiwe ukuba. Lo zimele isikhathi, kanye isilinganiso ukulethwa isikhathi unlockings efanayo, azoboniswa isikrini uma usufakile ifomu lesicelo.